War weyn oo dhaqaale oo ku xeeran bartamaha magaalada Sioux City. Ho-Chunk Capital maanta waxay dham | KWIT
Ho-Chunk Capital waxay mas'uul ka tahay dhammaan maalgashiga Ho-Chunk, Inc, oo ah shirkadda horumarinta dhaqaalaha ee Winnebago Tribe ee Nebraska.
Dhismaha xabsiga cusub ee Degmada Woodbury dib ayaa loo dhigay illaa ugu yaraan dayrta sababtoo ah boodka qiimaha qalabka.
Saraakiisha Maamulka Xarunta Sharci fulinta Sharciga Gobolka Woodbury, oo kormeerayay xabsiga cusub ayaa sheegaya in walxaha ay ku kordheen qiimaha ilaa 70%.
Bishii Maarso ee sanadkii hore, codbixiyayaashu waxay ansixiyeen mashruuca $ 50 milyan oo doolar si loogu badalo jeelka hada jira ee ay masuuliyiintu sheegeen inuu ku jiray xaalad xun oo aad u xun. Jeelka cusub, ee 28-ka bari ka xigta magaalada Louis Boulevard, waxaa loo qorsheeyay in la furo sanadka soo socda.
Waaxda Caafimaadka Bulshada ee Iowa waxay soo warisay 13 kale oo Iowans ah inay u dhinteen dhibaatooyinka COVID-19 iyadoo in ka badan 500 oo tijaabo laga helay, iyadoo 22 kiis oo dheeri ah laga helay Gobolka Woodbury.
Iyo, warbixinta toddobaadlaha ah ee COVID-19 ee ka socota Dugsiga Xaafadda Bulshada ee Magaalada Sioux ayaa muujineysa hal arday oo dheeraad ah iyo hal xubin shaqaale ah oo tijaabinaya cudurka 'coronavirus'. Waxaa jira 17 arday iyo afar macallin iyo shaqaale ku jira karantiil.